मंगला माध्यमिक बिद्यालय - Mangala Secondary School
गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी जिल्ला, मंगला गाउँपालिका वडा नं. २ (साविक बाबियाचौर गा.वि.स वडा नं. ५) बाबियाचौर बजारमा रहेको मंगला माध्यमिक विद्यालय समुद्र सतह– करिब ११०० मिटर उचाइमा रहेको छ । यो बेनी दरबाङ मोटरबाटो– दक्षिण तर्फ म्याग्दी नदीको उत्तरतर्फ पर्दछ । यस विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल ११–७–३–२ रहेको छ । मंगला गाउँपालिका वडा नं. २ बाबियाचौरमा रहेको यस विद्यालय २८ं २३' उत्तरी अक्षाशं र ८३‌ं २७' पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ...
फोटो ग्यालरी ::
सबै फोटोहरु हेर्नुहोस
भावी सन्ततिहरुलाई उज्यालो, भविष्य, निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको यस मंगला माध्यमिक विद्यालय जिल्लाकै पुरानो मध्येको एक र हाल मंगला गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको एक प्रमुख विद्यालय हो । यसको स्थापना प्रा.वि. विद्यालयको रुपमा वि.स. २००९ सालमा, निम्न माध्यमिक विद्यालयको रुपमा वि.स. २०२२ सालमा, माध्यमिक विद्यालयको रुपमा वि.स. २०३६ सालमा र साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय वि.स. २०५६ सालमा स्थापना भई यस क्षेत्रबाट थुप्रै शैक्षिक अग्रजहरु एवम् समाजसेवी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, राष्ट्रसेवकहरु उत्पादन गरिरहेको छ । जिल्लाकै इतिहास बोकेको र गाउँपालिकाको...
विद्यालय सुधार योजना विद्यालयको समग्र विकासको लागि एक अनिवार्य शर्त हो । निश्चय नै योजना विना राम्रो विद्यालयको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । हाम्रो र राम्रो विद्यालय बनाउनका लागि विद्यालय सुधार योजना एक महत्वपूर्ण साधन हो । विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकास विद्यालयमा बन्ने योजना निर्माणमा निर्भर रहने कुरामा दुईमत छैन । तसर्थ राम्रो विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई संलग्न गराइनु पर्दछ । विद्यालयसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभागितामा निर्मित योजना सफल योजना बन्न सक्छ र यसले विद्यालयलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउन...